Biloowga Codsiyada Dugsiga ee Onlinka
Soomaali: Biloowga Codsiyada Dugsiga ee Onlinka
MPS Home > Schools > Virtual School Request Kick-off > Soomaali: Biloowga Codsiyada Dugsiga ee Onlinka
Ka baaro boga MPS Hada si aad wax badan uga barato waxbarashadeena loo dhan yahay, oo leh taageerada bulshada iyo waxbarashada waarta leh. Xaflada furitaanka Dugsiga ee onlinka (Virtual) wuxuu bilaabanayaa bisha Diisambar 7 illaa Janaayo 30. Booqo boggaga internetka ee iskuulada si aad u ogaato goorta jadwalkooda dhacdada soo dhawweynta loo qorsheeyay.
Bilaabashadan bandhiga onlinka ah waxay fursad u tahay qoysaska inay sahamiyaan ikhtiyaarrada cusub ee barnaamijka dugsiga. Iyadoo ay weheliso fadhi su'aalo weydiin iyo jawaab toos ah oo ay la yeelanayaan khabiirada MPS, waxaana halkaas ku soo bandhigi doonnaa macluumaad ku saabsan:
Iskuullada bulshada waxay bixinayan barnaamijyada STEM, Barashada Muusigga, Akhris-qorista, Xisaabta, Barnaamijyada Tacliinta Sare, iyo waxyaabo kaloo badan.
Barnaamijyada dugsiyada Magnet oo ku takhasusay Farshaxanka, STEM / STEAM, Labada Luuqad, Montessori, Daraasaadka Caalamiga ah iyo bani'aadanimada..
Daraasadaha Jinsiyadaha ee lagu heli karo xulashada dugsiga sare iyo shuruudaha qalinjabinta.
Barnaamijyada Waxbarashada Carruurnimada Hore laga bilaabo dhalashada illaa shan jirka.
Adeegyada Waxbarashada Gaarka ah ee lagu bixiyo dugsiyada u dhow gurigaaga.
Nidaamka isqorista codsashada dugsiga iyo sida loo raadsado ikhtiyaariyada dugsigaaga iyadoo lagu saleynayo cinwaanka deegaanka gurigaaga.
OGEYSIIN: Dhacdadaan waa la duubi doonaa sidaa darteed haddii aadan awoodin inaad la jaan qaadomunaasabadaan bisha Diseembar 5eeda, Waxaad booqataa shabakadeenna wixii ka dambeeya taariikhdaas oo fiiri bilowga xilliga firaaqadaada.
Halkan ka fiiri mar,kale bisha Diseembar 5eeda si aad uhesho isku linkiga xiraya foomka codsiga iskuulka ee deyrta 2021; codsiyada dugsiga ee sanad dugsiyeedka 2021-22 waxaa ay ku egyihiin bisha Febraayo 7.
Wixii su'aalo ah ee ku saabsan dhacdada ama xulashada dugsigaaga, la xiriir xafiiska Diiwaangalinta Ardayda oo ah 612.668.1840 ama sps.department@mpls.k12.mn.us.
(Foomka codsiga dugsiga online ee sanad dugsiyeedka hadda 2020-21 waxaa ka helaysaa halkaan.)